विद्यालयको प्रअ हवल्दारको मातहातमा लेफ्टिनेन्ट जस्तो !
रत्न विरही घिमिरे / नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । यसमा सम्बद्ध सबै पक्षको दोष भए पनि दोषको ठूलो हिस्सा शिक्षकहरूको भागमा परेको छ । व्यवस...
शिक्षक व्यवस्थापन र नियमित सरुवा प्रावधान
- बामदेव पौड्याल / नेपाल जति लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रगमन तर्फ हानिन खोज्छ, यहाँको शिक्षाले त्यो गति समात्न सक्दैन । सरकारको ठूलो राशी लगानी हुने सामुदायिक शिक्षाको स्तर दिनहुँ ओराले लागेको विश्लेषण हु...
टालटुले शिक्षा ऐन
– देवीराम आचार्य / शिक्षा ऐन कतिपटक संशोधन भएको छ ? यो झट्ट भन्न कठिन छ । ऐनमा लेखेको हिसाबले सातौ संशोधन २०५८।१०।२५ छ तर गन्ने हो भने ११ वटा संशोधनका सूचि छन् । हालैमात्र संशोधनका लागि तयार भएको विध...
लाईसेन्स बिनाका शिक्षक दुर्घटनाका कारक
- देउमान लिम्बुबिना लाइसेन्स शिक्षण गर्न दिनु भनेको कसैलाई बिना लाइसेन्स सवारी साधन चलाउनु दिनु जस्तै हो । एक असक्षम चालकले कुनै वर्तमान व्यतिको ज्यान लिन सक्छ तर बिना लाइसेन्सको एक असक्षम जनशक्तिले म...
सार्वजनिक शिक्षाः किन र कसरी ?
- केदारभक्त माथेमा निजी शिक्षाका अध्येता जेम्स टुली (James Tooley) ले आफ्नो पुस्तक 'A Beautiful Tree' मा निजी शिक्षाले सार्वजनिक शिक्षालाई विस्थापित गर्ने तर्क गरेका छन् । चीन, भारत, अफ्रिका लगायतका...
- गजेन्द्र बुढाथोकी २०४६ सालपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिपछि मुलुकका विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उल्लेख्य फड्को...
बन्द गरौं साक्षरताका कुरा
- देवीराम आचार्य मान्छे साक्षर हुनु राम्रो कुरा हो । साक्षर मात्र होइन धेरै पढ्नु त अझ राम्रो कुरा । नेपालमा २०१३ बाट अमेरीकाले साक्षर बनाउन शुरु गरेको इतिहास हो क्यारे । ५८ वर्षदेखि नेपालमा नागरिकहरु...
नैतिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, प्राध्यापक र अख्तियार
- केशवराज पौडेल नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउनु पर्ने हामी शिक्षक, प्राध्यापकमाथि आज जनसाधारणले शंकाको दृष्टिबाट हेर्न थालेका छन् । मुलुकको शैक्षिक जगत तिन दलीय भागवण्डाबाट जन्मिएको चौथो दलीय संरचना (वर्णशं...
अभिभावकको घाँस सन्देश
- अनमोलमणि पौडेल यस्तो नुहुनु पर्ने थियो, भयो । असोज ५ गते आइतबार प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि लज्जाले शीर झुकेको कालो दिन हो । जुन दिन प्रज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वमा बसेकाहरुले आफूलाई अक्षम स्वीकार्दै घाँस...
विश्वास गुमाउँदै विश्वविद्यालय, विदेशिदै विद्यार्थी
- श्रीधर पौडेल देशमा नौ वटा विश्वविद्यालय छन् । घरकै मानो मुठी खाएर, नेपाली शुल्क तिरेर पढ्ने सुविधा यहीँ छ । विदेशी विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन लिएर चलेका कलेजको संख्या पनि सयभन्दा बढी छ । तर, नेपालका...
सन्दर्भः स्रोत व्यक्तिको सरुवा
- देवीराम आचार्य स्रोत व्यक्तिको जागिर यति धेरै आर्कषित भयो कि नियमित विद्यालय जान नपर्ने, पढाउन पनि नर्पर्ने, नियमित हाँजिर समेत गर्न नर्पर्ने तर आर्थिक हिसाबले ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती पर...
कान जोगाउने उपाय
- आचार्य लक्ष्मण भण्डारी मानिसले जन्मजात प्रतिभा लिएर जन्मिएको हुन्छ । सबै मान्छेले आफू भित्रको सम्भावनालाई विकसित तुल्याउन सक्दैनन् । जसले अध्ययन र अभ्यास गरे, उनीहरूले मात्र आफ्नो जन्मजात प्रतिभालाई...
'तिमीहरु अझै लौरो चलाउँछौ ?'
- यम घिमिरे एक दिन मिस ह्यारिसनले भनेकी थिइन्,'हामी केटोकटीलाई छोटो दुरीको भ्रमणमा लैजादै छौं, रुची भए टिममा स्वागत गरौँला ।' आफू पनि एक बेलाको शिक्षक । त्यसमाथि आफ्नै छोरी पढ्ने एडमन्टनको सेन्ट क्याथ...
- अनमोलमणि पौडेल एसएलसी पास हुन् वा फेल, प्लस टु भर्नाको तयारी गरिरहेका हुन् वा मौका परीक्षाको प्रतीक्षा, उनीहरुको दैनिकी अब एकाएक बदलिने छ । १५/१६ वर्षे किशोर उमेरका झण्डै पौने ६ लाखको हुलले देशका भि...
निजी स्कुल र ‘सत्याग्रही’ शिक्षक
- प्रकाश सिलवाल काठमाडौं, सिनामंगलस्थित एक निजी विद्यालय । विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहेको कक्षा एक । भर्ना, वार्षिक शुल्क र अन्य गरी २८ हजार रुपैयाँको विल तयार । आफ्नै स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना हुन चाहेक...